भारतीय वायुसेनाको बेपत्ता विमान ८ दिनपछि यस्तो अवस्थामा फेला पर्‍यो, बिश्व नै चकित — Sanchar Kendra
१टोकियो ओलम्पिकमा आज टेबल टेनिस र ब्याडमिन्टनको ब्याटल
२सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पनि, मन्त्रालय बाडफाँडमा यस्तो सहमति जुटाउने कोसिस
३इनार खन्दा फेला पर्यो ‘१० करोड डलर पर्ने एउटा विशाल नीलमणि’
४सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी श्रेष्ठको अवकाशविरुद्ध सर्वोच्चले के दियाे अन्तरिम आदेश ?
५माधव नेपाललाई आइलाग्यो संकट
६थप ३८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३३ को मृत्यु
७टोकियो ओलम्पिक अपडेट- सय मिटर फ्रिस्टायलको लङ कोर्समा गौरिकाको राष्ट्रिय कीर्तिमान
८प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई देउवाले के भने ?
९माधव नेपाल समूह र जनमोर्चा देउवा सरकारमा सहभागी नहुने
१०गुल्मीको मुसिकोटमा जीप दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु
१२तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता पक्षबीच सहमति
भारतीय वायुसेनाको बेपत्ता विमान ८ दिनपछि यस्तो अवस्थामा फेला पर्‍यो, बिश्व नै चकित
काठमाडौं । भारतीय वायुसेनाको एएन–३२ जहाजको भग्नावशेष अरुणाचल प्रदेशमा फेला परेको छ। गएको आठ दिनदेखि उक्त जहाज हराइरहेको थियो।
जहाजमा १३ जना सवार थिए। भारतीय वायुसेनाले ट्विट गरेर जहाजमा सवार यात्रु र चालक दलका सदस्यहरुका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। असमको जोरहाटबाट उडान भरेको केही समयपछि उक्त मालवाहक जहाज विमानस्थलसँगको सम्पर्कबाट विच्छेद भएको थियो।
यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि पाकिस्तानले आफ्नो हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने भएको छ । पाकिस्तानले आफ्नो हवाई मार्ग पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानका लागि बन्द गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी किर्गिस्तान भ्रमणमा जानका लागि भने पाकिस्तानी हवाई मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने पाकिस्तानी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
मोदी १३ र १४ जुनमा किर्गिस्तानको बिश्केकमा आयोजना हुने सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाँदै छन् । सो बैठकमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमारान खानसमेत सहभागी हुँदैछन् ।
भारतीय अधिकारीहरुका अनुसार पाकिस्तानले मोदी सवार विमानलाई आफ्नो आकाश मार्ग दिन सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर यसबारे औपचारिक जानकारी भारतलाई उपलब्ध गराउने आश्वासन पाकिस्तानी पक्षबाट आएको भारतीय अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
दुई विशेष प्रहरी अधिकारी दीपक खजुरिया र सुरेन्द्र वर्मा, प्रमुख कन्स्टेबल तीलक राज र सबइन्स्पेक्टर आनन्द दत्तालाई प्रमाण नस्ट गरेको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।
आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएका प्रवेश कुमार भने साँझी रामका साथी हुन् । गत वर्षको अप्रिलमा प्रहरीले मुद्दा चलाएका ८ जनामध्ये एक नाबालकको भने जम्मु–कस्मिरस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
अल्पसंख्यक बकरवाल समुदायकी ती ८ वर्षीया बालिकालाई अपहरणपछि अपराधीहरुले गाउँको एक मन्दिरमा बन्धक बनाएर राखी कयौं दिनसम्म बलात्कार गरी टाउको कुल्चेर मारेका थिए । उनको शव जनवरी १७ मा क्षतविक्षत अवस्थामा जंगलमा भेटिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले सो हत्याकान्डलाई दर्दनाक घटना भन्दै उचित छानबिनको माग गरेका थिए ।